လမ်းမပေါ်မှာ ပန်းရောင်းနေရတဲ့လေးတွေအတွက် မျက်နှာအကာ နှာခေါင်းစဉ်း နဲ့ လက်သန့်ဆေးတွေ လှူဒါန်းပေးသွာမယ်ဆိုတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မော်ဒယ် ဆိုင်နွန်း – CharTake
လမ်းမပေါ်မှာ ပန်းရောင်းနေရတဲ့လေးတွေအတွက် မျက်နှာအကာ နှာခေါင်းစဉ်း နဲ့ လက်သန့်ဆေးတွေ လှူဒါန်းပေးသွာမယ်ဆိုတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မော်ဒယ် ဆိုင်နွန်း
chartake | August 31, 2020 | Cele News | No Comments
လမ်းမပေါ်မှာ ပန်းရောင်းနေရတဲ့လေးတွေအတွက် မျက်နှာအကာ နှာခေါင်းစဉ်း နဲ့ လက်သန့်ဆေးတွေ လှူဒါန်းပေးသွာမယ်ဆိုတဲ့ Sinon
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆင်းရဲချို့တဲ့ပြီး လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ အမြဲတမ်းတတ်အားသမျှပါဝင် ကူညီတတ်တဲ့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့အချစ်တော် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက မော်ဒယ်လ် Sinon ကတော့ အခုတစ်ခါမှာလည်း လမ်းမပေါ်မှာ ပန်းရောင်းနေကြတဲ့ ကလေးတွေအတွက် မျက်နှာအကာ နှာခေါင်းစဉ်းနဲ့ လက်သန့်ဆေးတွေကို မနက်ဖြန်မှာ လှူဒါန်းပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။
” လမ်းမပေါ်က ပန်းရောင်းနေကြတဲ့ ကလေးတွေ အတွက် ကျတော်က မနက်ဖြန် မျက်နှာ အကာအကြည် မျက်နှာတပ်နှာခေါင်းစည်းတွေ လက်သန့်ဆေးရည် တွေပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Covid-19 က ပြန်ဖြစ်ပွားနေပါပီ ကျတော်တို့ ရန်ကုန်မှာကောတစ်နိုင်ငံ လုံးမှာပါ။ ဒါကြောင့် ကျတော်တို့ ကောင်းကောင်းကာကွယ် ထားရမှာဖြစ်ပါတယ် ကျဝောာ်တို့ ပတ်ဝန်းကျင် မိသားစုတွေကိုပေါ့!
ကျတော်တို့က ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ Virus တိုင်းထက် ပိုအင်အားကောင်းတယ် ။ ကျတော်တို့ မှာကျတော်တို့ ရှိတယ်လေ ။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဂရုစိုက်ကြမယ်ဆိုရင် ပေါ့။ Fighting 🦠 ” ဆိုပြီး သူရဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာ မျှဝေးထားပါတယ် ။
Sinon ကတော့ တကယ်ကို လေးစားစရာကောင်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင် လေးပါပဲနော်။ ပရိသတ်ကြီးကလည်း လမ်းမပေါ်မှာ ပန်းရေင်နေရတဲ့ ကလေးတွေကို ကူညီပေးမယ့် Sinon ကို တစ်ခုခု ပြောပေး ခဲ့ပါဦးနော်။ Source ; Sinon Loresca
Unicode … လမျးမပျေါမာ ပနျးရောငျးနရေတဲ့လေးတှအေတှကျ မကျြနာအကာ နာခေါငျးစဉျး နဲ့ လကျသနျ့ဆေးတှေ လဒါနျးပေးသှာမယျဆိုတဲ့ Sinon
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ဆငျးရဲခြို့တဲ့ပွီး လိုအပျတဲ့နရောတှမော အမွဲတမျးတတျအားသမပြါဝငျ ကူညီတတျတဲ့ ပရိသတျတှေ ရဲ့အခဈြတျော ဖိလဈပိုငျနိုငျငံက မျောဒယျလျ Sinon ကတော့ အခုတဈခါမာလညျး လမျးမပျေါမာ ပနျးရောငျးနကွေတဲ့ ကလေးတှအေတှကျ မကျြနာအကာ နာခေါငျးစဉျးနဲ့ လကျသနျ့ဆေးတှကေို မနကျဖွနျမာ လဒါနျးပေးမယျလို့ သိရပါတယျ။
” လမျးမပျေါက ပနျးရောငျးနကွေတဲ့ ကလေးတှေ အတှကျ ကတြျောက မနကျဖွနျ မကျြနာ အကာအကွညျ မကျြနာတပျနာခေါငျးစညျးတှေ လကျသနျ့ဆေးရညျ တှပေေးသှားမာ ဖွဈပါတယျ ။
Covid-19 က ပွနျဖွဈပှားနပေါပီ ကတြျောတို့ ရနျကုနျမကောတဈနိုငျငံ လုံးမာပါ။ ဒါကွောငျ့ ကတြျောတို့ ကောငျးကောငျးကာကှယျ ထားရမာဖွဈပါတယျ ကဝြျောာတို့ ပတျဝနျးကငျြ မိသားစုတှကေိုပေါ့!
ကတြျောတို့က ကမ်ဘာပျေါမာရတဲ့ Virus တိုငျးထကျ ပိုအငျအားကောငျးတယျ ။ ကတြျောတို့ မာကတြျောတို့ ရတယျလေ ။ တဈဦးတဈယောကျခငျြးစီ တဈယောကျကို တဈယောကျ ဂရုစိုကျကွမယျဆိုရငျ ပေါ့။ Fighting 🦠 ” ဆိုပွီး သူရဲ့ လူမကှနျယကျမာ မဝြေးထားပါတယျ ။
Sinon ကတော့ တကယျကို လေးစားစရာကောငျးတဲ့ စိတျဓာတျပိုငျရငျ လေးပါပဲနျော။ ပရိသတျကွီးကလညျး လမျးမပျေါမာ ပနျးရငျေနရေတဲ့ ကလေးတှကေို ကူညီပေးမယျ့ Sinon ကို တဈခုခု ပွောပေး ခဲ့ပါဦးနျော။ Source ; Sinon Loresca
အသက် ၈၀ အမေအိုကြီးရဲ့ ကန်နဖော့နဲ့ ကန်စွန်းရွက်ကို ၂ ရာဖိုး ၃ စီးရမလားဆိုပြီး ဈေးဆစ်စနောက်ကာ ငွေ ၁ သိန်းလှူဒါန်းလိုက်တဲ့ ဒိန်းဒေါင် ( ရုပ်သံ )
ဒီနေ့မနက်မှာ ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ကြွေလွင့်ခဲ့ရတဲ့ ဦးရန်ပိုင်စိုးအတွက် ဝမ်းနည်းနှမြောမိကြောင်း ပြောလာတဲ့ မေ့ချစ်သက်
ဖြူဖြူထွေးကို မနာလိုဖြစ်နေတဲ့ မင်းခန့်ကျော်ဆိုတာ ဒီကောင်လားဆိုပြီး အထုပ်ဖြည်ပြလိုက်တဲ့ ဆယ်လီစုံထောက်ကြီးဟန်ငြိမ်းဦး